नायिका रेखा थापाले फेरि विवाह गर्दै ! सार्बजानिक गरिन आफ्नो बिहेको समय !! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/नायिका रेखा थापाले फेरि विवाह गर्दै ! सार्बजानिक गरिन आफ्नो बिहेको समय !!
नायिका रेखा थापाले फेरि विवाह गर्दै ! सार्बजानिक गरिन आफ्नो बिहेको समय !!
रेखा थापा कुनै समयकी निकै चर्चित र व्यस्त नायिका हुन्, उनी सदावहार चर्चामा रहने नायिकामा पर्छिन् , कुनै समयमा उनको नामले मात्र पनि चलचित्र सफल हुने गर्थे । केहीबर्ष देखि भने लगातार उनका चलचित्रहरु असफल भैरहेका छन् । पछिल्लो समयमा रेखा चलचित्रमा भन्दापनि राजनीति क्षेत्रमा बढी संलग्न छिन् ।
उनले फ्यानलाई डन्ट वरी म विवाह गर्छु भनेकी छिन् यो कुरा सुन्दा उनका फ्यानमा उनको विवाह कहिले हुन्छ भनेर उत्सुकता जाग्नु स्वभाविकै हो । रेखाले आफू ४० कटेसी विवाह गर्ने बताएकी छिन् , उनी अबको ४ बर्षजति मज्जाले राजनीति र चलचित्र क्षेत्रमा रमाइलो गर्ने र त्यसपछि मात्र विवाह गर्ने सोचमा रहेकी छिन् ।
रेखाले आफ्नो कोहीसँग पनि प्रेम भने नभएको बताएकी छन् । उनलाई प्रेमप्रति कत्तिपनि विश्वास नै छैन । रेखाले प्रेमलाई फेक भनेकी छिन्त, र उनले आफ्नो श्रीमान् भने राजनीति क्षेत्रलाई बुझेको हुने बताएकी छिन् । रेखाले यसो भनिरहँदा उनको फ्यानलाई उनको विवाह हेर्न कौतुहलता बढिरहेको छ । आशा छ नायिका रेखाले आफ्नो वचन पुरा गर्दै फेरि एकपटक विवाह गर्नेछिन् ।
हेर्नुस्, हलिउड शैलीको एक्सनले भरिएको ‘साहो’को ट्रेलर
भाइरल जोडी बखत बिस्ट प्रहरी चौकीमा ? छिमेकिले गरे बखतबारे यस्तो खुलासा(भिडियो सहित)
८ मिनेटको दृश्यका लागि ७० करोड खर्च !
अघोर बाबाको दुर्लभ भिडियो बहिरियो, नेपाल टेलिभिजनमा गौरी मल्लले लिएको अन्तर्वार्ता पनि बाहिरियो, पुरानो भिडियो हेरेर रोए बाबा (भिडियो)